Home Wararka Farmajo ee ka abaal dhacay Shacabka Soomaaliya kaddib markuu koox Qalin shubatada...
Farmajo ee ka abaal dhacay Shacabka Soomaaliya kaddib markuu koox Qalin shubatada ah ka aqbalay dhismaha Guri dalxiis.
Dadka qaarkiis ayaa dhibsaday ka hadalka mashruuca qalinshubatada ( Koox isu ekeysiiyay wadaniyiin haseyeeshe ah qawleysato dhaceysa dad masaakin ah ee N&N loo bixiyay), kooxdaasoo soo fekertay in guri dalxis ah loo dhiso Madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmajo.
Waxaan qabaa in ka hadalka iyo ka falcelinta Mashruuca abaal dhaca ah ay muhiim tahay waayo wuxuu daaha ka qaaday laba kackeynta dhaqan xumo siyaasadeed ee aafeysay Soomaaliya 5tii sano ee la soo dhaafay walow la rajeynayay in 15ka Maajo 2022 la soo afjaray dhaqankaas.
Dhaqanxumada siyaasadda indhasarcaadka ah waxaa ku soo caan baxay Silvio Berlusconi (RW hore ee dalka talyaaniga) iyo Donald Trump ( Madaxweynihii hore ee Mareykanka), siyaasaddaaso ku dhisan beenta-iidhehda- indhasarcaadka, kala qaybinta bulshada, iyo kacaameynta – kicinta- dadweynaha.
Sida ka muuqata baraha bulshada, mashruucan waxaa soo fekeray 4 qofood, waxaana kal iyo laab ku oggolaaday waayelkooda oo ah Madaxweyne hore Farmajo.
5ta qofood waxay taarikhda Soomaaliya ka geli doona bogga macallimiintii indhasarcaadka iyo qalin shubadka.
Shantaas waxay kala yihiin:
1. Maxamed Cabdullaahi Farmajo – Madaxweyne hore
2. Maxamed Cabdullaahi Ciise – Agaasimihii guud hore ee Madaxtooyada Farmajo
3. Cabdirashid Maxamed Xaashi – Agaasimihii hore ee Isgaarsiinta Madaxtooyada Farmajo
4. Cali Cabdi Wardhere (Cali Yare Cali) – gacanyaraha gaarka ah ee Madaxweyne hore Farmajo
5. Sheikh Cabdi Xersi Wadadka iyo dhirrigeliyaha Kooxda N&N
Ololaha Mashruuca indhasarcaadka iyo jashwareerinta shacabka Soomaaliyeed ee ku saabsan dhismaha guri loogu “mahadcelinayo Maxamed Cabdullaahi Farmajo” kaddib markii uu ku guuldareystay in mar labaad loo doorto xilka Madaxweynaha JFS wuxuu ku xadgudbay mabaadi’ iyo dhaqanka wanaagsan oo asaaska u ah dhaqanka diinta islaamka, sumcadda, karaamada, iyo nidaamka dowladnimo ee shacabka Soomaaliyeed higsanayo, kuwaaso ay ka mid yihiin:
1. Kala saaridda saboolka iyo hantiilaha. Yey ku waajibaa zakada, sadaqada, yaana mudan in la siiyo Zakada iyo sadaqada; Mas’uuliyadda saaran Madaxweyne hore farmajo waxay aheyd inuu taagerayaashisa ku baraarujiyo inay taageraan dadka saboolka ah iyo kuwa abaaraha tabaaleeyen, madaama shacabka Soomaaliyeed sharfay asaga. Nasiib darro, farmajo waa seegtay garashadaas wanaagsan.
2. Farmajo oo ahaa Madaxweyne shacabka Soomaaliyeed si wadajir ah ugu qoondeeyay $ 33,000 doolar bishii, ayaa garadkiisa siiyay inuu kooxda N&N ka codsado ama ka aqbalo dhismo guri gaar u leeyahay, taaso aan ku habbooneyn asaga, xaaskiisa, iyo caruurtiisa, isla markaana abaal dhac ku ah shacabka Soomaaliyeed
3. Caqliga caadiga ah waa adag tahay inuu garwaaqsado sida Madaxweyne hore Farmajo ku aqbalay in guri loo dhiso magaca “Madaxweynaha shacabka Soomaaliyeed,” asagoo ogsoon in Barlamaanka Federaalka diiday inuu mar labaad u doorto Madaxweynaha JFS. Ma natiijada doorashada Barlamaanka Federaalka ayaa farmajo diidan yahay? Sidee ku aqbalaya inuu xubin ka noqdo barlamaan uusan aqoonsaneyn matalaada shacabka Soomaaliyeed asagoo sheeganaya inuu yahay Madaxweyne Shacab? Mise dhibaato garasho xumo ayaa jirta?
4. Madaxweyne hore farmajo wuxuu iska indhatiray sharciyada iyo xeerarka ka yaal lacag ururinta iyo lacag dhiqidda (money laundering) oo 5 sano iyo bilo uu mas’uul ka ahaa ilaalintooda. Tan kale, waxaa muuqata in Farmajo ka baxay ballanqaadkiisii 15ka Maajo 2022 kaddib looga adkaaday doorashada Madaxweynaha, kaasoo ahaa inuu si buuxda u taagero Madaxweynaha la doortay Xassan Sheikh Maxamud oo mar dambe uusan dib ugu noqon doonin iska daba wareegii iyo hagardaamooyinkii caadada u ahaa shan sano. Inuu noqdo mucaarad waa xaq dastuuri, hase yeeshe, haseyeeshe xaq uma laha jaahwareerinta shacabka iyo sheegashada xil been ah.
Waxaa nasiib darro ah in Madaxweyne Farmajo kala garan waayay qiimaha u dhexeeya guri kooxda N&N u dhisto iyo lacagta canshuurta ah ee uu bil kasta khasnadda dowladda ka qaadanayo, iyo xushmadaha kale ee magaca shacabka Soomaaliyeed loogu tala galay abaalmarin ahaan.
5. Madaxweyne hore Farmajo kama fiirsan Mashruuca qalin shubadata ee kooxda caanka ah soo fakereen asagana farxad ku aqbalay kaaso dhaawacaya dhammaan sumcadda iyo karaamada Ummadda Soomaaliyeed, asaga ku ah ceeb weyn, madaama uusan garan deeqda iyo taakuleynta shacabka Soomaaliyeed wadajirka ugu qoondeeyay ee dastuurka kmg, Miisaaniyadda Qaranka, iyo sharciga gaarka ah ugu qoran.
Waxaan Madaxweyne hore Farmajo u furan inuu si degdeg ah uu shacabka Soomaaliyeed ula hadlo asagoo faraya kooxdiisa qalin shubatada ah inay joojiyaan Mashruuca lagu sheegay dhismaha guriga, amro in la xiro Xisaabaadka magacyada gaarka lagu furay, dadka masaakinta ah loo celiyo lacagtooda, isla markaana cudurdaar iyo ballan qaad siiyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ficilkaas iyo kuwa la mid ah uusan hadda kaddib oggolaan doonin, taageri doonin, lana diriri doono. Haddii Farmajo ka aamuso arrintaas 48 saac ee soo socda, waxaan qabaa in Farmajo uusan ka damqaneyn dadkiisa, dalkiisa, isla lumiyay karaamada shacabka Soomaaliyeed sida wadajirka ugu deeqeen. Xildhibannada Barlamaanka Federaalka waxaa u furan inay beddelaan qoondada Miisaaniyadda iyo daryeelka kale ee loo fidiyay Farmajo magaca shacabka Soomaaliyeed.
W/Q: Dr. Maxamud M. Culusow
Previous articleQabanqabadii u danbeeysay ee xaflaxda Caleema Saarka Madaxweynaha oo Muqdisho ka socota
Next articleWafuud ka socda Kenya & Koonfurta Suudaan oo soo gaaray Muqdisho
Farmaajo oo u safrayo Masar iyada oo aan laga jawaabin Qoramadii...